Ndagwurugwu Plakánek - PetrPikora.com
Ihe onyonyo eserese
PetrPikora.com on August 11, 2019
Onyonyo nbudata nke eji eme ihe n'efu.
Agara m nyere gị aka? Nye m kọfị.
Ekwuputala Nkpuru osisi nke Plakánek na 1990, ọ dịkwa na ókèala nke Mladá Boleslav na Jičín n'etiti obodo Podkost, Vesec u Sobotky, Střehom na Dobšín. Isi okwu nke nchekwa bụ ndagwurugwu nwere oke okwute na ụlọ elu, ala ahịhịa juru na iberibe oke ohia, oke ọhịa, osisi pine na osisi acidophilic na obere osisi oak. N’oge gara aga, ebe obibi ugbu a edochiwo nnukwu ọhịa ọhịa ash-alder mbụ. Mpaghara echedoro nọ na-elekọta AOPK ČR - ụlọ ọrụ mpaghara na Liberec.
Aha Plakánek sitere na 17. narị afọ, dị ka ezinụlọ Plakák, onye na-akpọ oku na mpaghara a, site na mgbe ahụ ha nwere "anya mmiri".
N’afọ 2015, a na-akpachapụ ndozi ahụ n’ókèala ahụ megidere usoro edepụtara ya dịka atụmatụ nchịkwa, nke mebiri mpaghara echekwara.
Nnukwu ndagwurugwu ahụ, a na-akpọkwa Střehomský Plakánek, bụ Osimiri Klenice gwuru ya, bụ́ nke nwekwara isi iyi ndị si na nkume dị elu na ugwu ugwu na-eri nri ahụ. N'ebe ndịda ndagwurugwu ahụ, e nwere ọdọ mmiri a na-akpọ Obora ma ọ bụ Pilský. N'ebe na-adịghị anya site na ọdọ mmiri ndị dị n'akụkụ ndịda ruo na ndagwurugwu n'akụkụ ndagwurugwu n'akụkụ Places nke a na-akpọ Vesecký Plakánek (mgbe ụfọdụkwa obere Plakánek), bụ nke mebere iyi Vesecký, na-aga site na Vesec. Na ndagwurugwu a nke nwere nkume, echekwara ọtụtụ okwute ochie, ebe enwetara nkume okwute dị mma maka ebumnuche. Ststehomské Plakák nke Střehomské Plakák bụ Kost Castle guzobere ya, n'azụ ya a na-akpọ ndagwurugwu ahụ Prokopské ma na-eduga Libošovice.
Na ụdị Platinnek Valley Nature Reserve, enwere ọtụtụ ụdị osisi na-adọrọ mmasị ma na-echebe dị ka: Iris pseudacorus, Silene dioica, Trollius europaeus, Dactylorhiza majalis, Lunaria rediviva ma ọ bụ Mmiri Snow (Leucojum vernum). Naanị otu ebe dị na Czech Republic bụ okirikiri glacial nke worm na-acha ọbara ọbara (Melandrium rubrum), nke onye na-ere ọgwụ WJ Sekyra nke WJ Sekyra dere site na Mnichovo Hradiště mbụ.
N’oké ọhịa nke osisi coniferous na-achị dị ka ugo ugo (Bubo bubo), kestrel nkịtị (Falco tinnunculus), ugolo (Corvus corax), ugwu newt (Triturus alpestris), agwọ ahịhịa (Natrix natrix) na frog (Rana dalmatina) . Speciesdị dị mkpụmkpụ nke ndị pere mpe Horseshoe Bat (Rhinolophus hipposideros) na Kost Castle.
Kost nnukwu ụlọ - E zoro nnukwu ụlọ n’ime ugwu ndị gbara ya gburugburu, nke e wuru na 14. narị afọ ma ọ dịghị mgbe e meriri.
Studánka Roubenka - Ọfụma nwere mmiri doro anya, ebe kachasị amasị onye edemede Fráňa Šrámek, onye bi na Sobotka. Ntuziaka ahụ e hotara n'olulu ahụ.
Ihu ọma - Ebe ebe prehistoric wusiri ike mmebi site na 7. - 5. narị afọ BC ruo 13. narị afọ. Ndi ulo-elu bu olulu ili, nke di nso olulu mmiri Roubenka.
Vesec - Obodo nta nwere usoro eji echekwa obodo na gburugburu obodo. Onwere ihe nlere nke Holy Holy n’ime obodo.
Semtin linden - Ọ bụ osisi kwesịrị ncheta n'akụkụ ụzọ dị n'etiti Sobotka na Podkostí. Ebibiwo osisi lime ahu n'oké oke mmiri, ma aghaworị osisi ọhụrụ n'akụkụ ya.
Kost nnukwu ụlọNdagwurugwu Plakánek
Cow Cow Pencil sere eserese eserese eserese ihe osise
Elekere 15 gara aga
Dog Dog Dog Dog Head na-akpụ akpụ ihe ngosi gif animation Animated Scribble na-enweghị nbudata
Elekere 16 gara aga
Oyi Ihu Nwanyi Ihu Ndi Nwanyi Anyi Anyi Anyi Anyi Anyi Ekeputa Gim Anyi Ebube Scribble Free Download
Elekere 17 gara aga
Nkịta Dog Isi na-akpụgharị onyonyo eserese gif animation Animated Scribble na-enweghị nbudata
Elekere 18 gara aga
Hare Ista ekeresimesi ekeresimesi ekeresimesi animation animated gif image free download
Ụbọchị 2 gara aga
Ndị mmụọ ozi ekeresimesi ekeresimesi ekeresimesi animation na-akpali akpali
Ekeresimesi ekeresimesi ekeresimesi onyonyo gif animation na nbudata
Ụbọchị 3 gara aga
Ekelere ekeresimesi ekeresimesi ekeresimesi n'efu
Autocococo animation watercolor na-akpụ akpụ onyo animation gif free download
Lamborghini Car Motsa Esemokwu Foto Gif animim Animation Scribble Free Download
dee a comment kagbuo zara
Adreesị email gị agaghị ebipụta. Achọrọ ozi achọrọ *
Kwado m na mmepe
www.PetrPikora.com Amụma nzuzo Copyright © asụsụ Oke ike Archivbox Emba Isi ihe omuma Ajụjụ na azịza katalọgụ Sitemap
© 2019 site PetrPikora.com. Ikike niile echekwabara.